Omdala weGrike ongumlando
UCassius Dio, ngamanye amaxesha obizwa ngokuba yiLucius, wayengumlando- mlando waseGrike ovela kwintsapho ekhokelayo yaseNicaea eBithynia . Mhlawumbi mhlawumbi owaziwayo ngokupapasha umlando waseRoma kwimida engama-80 ehlukeneyo.
UCassius Dio wazalelwa eBithynia malunga ne-165 AD. Igama likaDio ngqo lokuzalwa alingaziwa, nangona kunokwenzeka ukuba igama lakhe lokuzalwa elipheleleyo nguClaudius Cassius Dio, okanye mhlawumbi uCassius Cio Cocceianus, nangona loo nguqulelo ayinakwenzeka.
Uyise, uM. Cassius Apronianus, wayengumphathi wesigqeba saseLycia nePamfiliya, kunye neCilicia neDalmatia.
UDio wayese-consul kabini, mhlawumbi ngo-AD 205/6 okanye nge-222, kwaye kwakhona ngo-229. UDoo wayengumhlobo wabamlawuli be-Septimius Severus no-Macrinus. Wayekhwelisa ubabini kunye no-Emperor Severus Alexander. Emva kokuhamba kwakhe kwesibini, uDoo wagqiba ekubeni athathe umhlalaphantsi kwiofisi yezopolitiko, kwaye waya ekhaya eBithynia.
UDio wabizwa ngokuba ngu-Emperor Pertinax, kwaye ucinga ukuba usebenze kule ofisi ngo-195. Ngaphandle komsebenzi wakhe kwimbali yaseRoma ukusuka kwisiseko sayo kuze kube sekufeni kuka-Severus Alexander (kwiincwadi ezili-80 ezahlukileyo), uDoo wabhala Imbali yeeMfazwe zoLuntu ze-193-197.
Imbali kaDio yabhalwa ngesiGrike. Iincwadi ezimbalwa zokuqala ezingama-80 zale mbali yaseRoma ziye zasinda nanamhlanje. Ininzi yale nto esiyayazi malunga nemibhalo eyahlukeneyo kaCassius Dio ivela kubaphengululi baseByzantine.
I-Suda inamnika i- Getica (ebhalwa nguDio Chrysostom) kunye nePerica (ngokwenene ibhalwe nguDinon waseColophon, ngo-Alain M. Gowing, kwigama elithi "Dio's Name," (i- Classical Philology , Vol. 85, No. 1. (UJan, 1990), iphe. 49-54).
Kwakhona Uthiwa ngu: Dio Cassius, uLucius
Umsebenzi kaCassius Dio owaziwa kakhulu yimbali epheleleyo yaseRoma ebonisa imiqulu engama-80 ehlukeneyo.
UDio washicilela umsebenzi wakhe kwimbali yaseRoma emva kweminyaka engamashumi amabini anesixhenxe ephando olunzulu ngesihloko. Imilinganiselo isithuba seminyaka engama-1 400, ngokuqala kokufika kuka- Aeneas e-Italy. I-Encyclopedia Britannica:
" Imbali yakhe yaseRoma yayineencwadi ezingama-80, ukuqala ngokufika kwe-Aeneas e-Italy kwaye iphelile kunye neye-consulship. Iincwadi ezingama-36-60 zisinda kwinxalenye enkulu. Baxela iziganeko ukusuka kwi-69 bc ukuya kwisi-46, kodwa kukho i-gap enkulu emva kwe-6 bc. Ininzi yomsebenzi igcinwa kwiimbali zakwa-John VIII Xiphilinus (ukuya kwi-146 bc kwaye ukusuka kwi-44 bc ukuya kwisi-96) kunye no-Johannes Zonaras (ukusuka kwi-69 bc ukuya ekupheleni).
Imveliso yeDio yayinkulu, kwaye ii-ofisi ezahlukahlukeneyo ezazibamba zamnika amathuba okuphanda. Iimbali zakhe zibonisa isandla sesoldati elisebenzayo kunye nezopolitiko; Ulwimi luchanekileyo kwaye lukhululekile kwifuthe. Umsebenzi wakhe ungaphezulu nje kokuhlanganiswa nje, nangona kunjalo: ithetha ibali laseRoma ukusuka kwimbono ye-senator eyamkele inkqubo yemikhosi yekhulu lesi-2 ne-3. I-akhawunti yakhe yeRiphabhlikhi yasekupheleni kunye nexesha le-Triumvirs lizalisekile ngokukodwa kwaye liguqulelwe ngokubhekiselele kwiimfazwe phezu kolawulo oluphezulu kwimihla yakhe. KwiNcwadi 52 kukho intetho ende kuMaecenas, icebiso lakhe kuAgasus lityhila umbono kaDoo wolawulo . "
Ungasusa iFluoride ngamanzi abilayo?
I-Sex & Quotes City
Iiprogram zeKharityhulam zamaKhaya aphezulu